03 Aug, 2018 - 00:08	 2018-08-02T13:03:46+00:00 2018-08-03T00:05:20+00:00 0 Views
KWAYEDZA makadini? Kubva gore rapera ndichingotsvaga! Ndiri mukomana ane makore 36, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane muviri seni ari pamakore 33 zvichidzika. Ngaave ari mudhuze nekwandinogara kuMasvingo kwaNyika. Andida ngaandibate pa0776 964 937.
Ndiri murume ane makore 62 ndinotsvakawo mukadzi ane makore 50 zvichidzika anoda zvokuroogwa. Andifarira nhare yangu 0777 917 743.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo shamwari dzinofanira kutaura nyaya dzebhora. Kana pane vanofarira ngavandibate pa0783 132 018.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 36, ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 45 kusvika 50. Ndiri pamushonga, andidawo ngaandibate pa0773 153 922.
Ndiri mukomana ane makore 35, ndinodawo musikana kana mukadzi ane mwana 1. Ngaave ane makore 21 kusvikawo 29 ari serious neupenyu. Vanoda ndibatei pa0716 100 264.
Ndiri murume ane makore 49 nevana 4 vave nedzimba dzavo. Ndinorima papurazi uye ndinotsvagawo mudzimai wekuchengetana naye. Nhare yangu 0778 259 052.
Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo mukadzi kana musikana ane makore ari pasi pe21. Anoda musha andifarira ndibate pa0773 172 007.
Ndiri murume ane makore 34, ndinodawo mukadzi ane makore 20 kusvika 25 wekuroora asiri pachirongwa kana ane mwana mumwe chete. Ngaave ari pachokwadi nekuvaka musha, ndinoenda kubasa uye anoda anofona pa0776 643 694.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 27, ndinotsvagawo musikana ane mwana kana asina akamboroorwa ane makore 19-25. Andifarira ngaandibate pa0785 790 720 kana masms ndopindura.
Ndinodawo musikana wekuroora ane makore 20 – 23. Ini ndiri driver wematrucks, anoda nezvangu ngaandibate pa0777 113 068.
Vaifona pa0771 241 567 chiregedzai henyu, ndakazomuwana wandaida.
Ndinotsvagawo mukadzi ari kuda zvemba. Ndine makore 39 ekuberekwa uye ndiri kwaMutare. Ndine mwana 1, vanoda ndibatei pa0776 166 475 asi matsotsi kwete.
Makadii veKwayedza? Ndotsvagawo mukadzi ane makore 21 – 27 asiri pamushonga anoda zvemba. Nhamba dzangu 0774 276 655.
Makadini? Ini ndiri murume ane makore 35 nemwana mumwe chete, ndiri kutsvagawo mudzimai wekuroora ari pachokwadi ave kuda zvemba. Nhare yangu 0737 778 061.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 18, ndinotsvaga musikana ane makore 18. Andifarira ngaandibate pa0713 282 899.
Makadini? Ndiri murume ane makore 47, ndinotsvaga mukadzi wekushamwaridzane naye ari muHarare kana Chitungwiza ane makore 18 – 40. Andifarira ngaandibate pa0779 182 381.
Ndiri murume ane makore 40 ndotsvagawo mukadzi ane rudo asina chirwere mukobvu ane mari yake, ane chero api makore. Ini handishande parizvino. Andifarira ndibate pa0777 088 728.
Makadini veKwayedza? Ndanzwa nekunyora shambadzo yangu. Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvaga musikana wekufambidzana naye akanaka pachiso chero ane mwana wake asina chirwere. Ngaave ane makore 18 kusvika 25 ane rudo uye anogara muHarare. Andifarira nhare yangu 0776 242 073.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 20 ndodawo musikana. Nhare yangu 0777 396 239.
Kwazivai veTishamwaridzane. Ndiri murume ane makore 35 nevana 2, ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye ane makore 25 – 30. Nhare yangu 0783 704 020.
Zita rangu ndinonzi Nyaradzo Shoko, ndine makore 23 ekuberekwa uye ndiri kutsvakawo murume ane makore 30 kusvika 35 ari pazvokwadi. Ndine mwana 1, nhare yangu 0777 234 621.
Makadii vabiki vechirongwa? Tokutendai zvikuru, ndinodawo musikana ari pasi pemakore 25 asina chirwere. Nhare yangu 0734 976 874.
Makadini? Ndiri murume ane makore 32 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 28 zvichidzika kana ane mwana wake. Nhare yangu 0713 394 332.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 43, ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo murume ane makore 45 zvichikwira. Andifarira ngaandibate pa0779 922 805.
Ndiri murume ane makore 28 nemwana mumwe uye ndotsvakawo mudzimai ari pachokwadi wekuroora ari pasi pemakore 27. Nhare yangu 0713 496 966.
Makadii vapepeti wenhau? Ndiri murume ane makore 27, ndinotsvaga mukadzi ane makore 24 zvichidzika. Ngaave ari pamushonga uye anoenda kumasowe achigara kwaRusape. Andifarira totaura nesms panhamba idzi 0774 263 682. Tariro ichipo!
Makadini? Ndinonzi Tinashe ndiri kutsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika. Ini ndine makore 22, nhare 0773 160 452
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 45 nevana 2 uye ndiri pamushonga asi hazvioneke. Ndinodawo mukadzi munaku ane zvaanoitawo kutsvaga kurarama ane makore 35 kusvika 50 akagadzirira kuita imba kana nhasi chaiye. Ari serious ngaandibate pa0773 106 052.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 22 ndodawo musikana ane makore 19 zvichidzika wemuHarare. Ini ndinoshanda, andifarira ndibate pa0783 951 606.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 39 nemwana1. Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi, ndiri pamushonga uye ndinodawo ari pamushonga asingaratidzi. Anoshanda ari smart, ane makore 40 kusvika 45 ngaandibate pa0716 446 784.
Ndiri murume ane makore 48 nevana 2 ndinoda mukadzi anoda zvemusha ari HIV negative. Anoda anondibata pa0777 889 642.
Ndiri mukadzi ane makore 47 ari pamushonga uye ndinotsvagawo murume ari pachokwadi anoda zvemba. Anenge andifarira anondibata panhamba dzinoti 0733 056 135.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvawo musikana mhandara ari mushava ane makore 20 kusvika 24 anobva Masvingo neBuhera handidi. Andifarira nhare yangu 0713 971 991.
Ndotenda chirongwa chino, ndakawana vandaida saka vese vaifona pa0777 132 807 zvaikaita.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi asina chirwere. Ane makore 18 – 22 andida anondibata pa0715 794 239, ndoda ari pachokwadi.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 34 uye mwana mumwe. Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 25 kusvika 31, ane mwana mumwe ngaandibate pa0776 193 153.
Ndiri murume ane makore 40 ndotsvagawo mukadzi wekuroora. Handina mwana uye handidi ane HIV. Ada nezvangu ndibate pa0782 849 298.
Makadini veKwayedza? Ndingafara chaizvo mukandishambadzawo. Ini ndiri murume ane makore 38. Ndinotsvakawo mudzimai ane makore 24 kusvika 35 ane mwana mumwe kana vaviri. Anoda zvemba ari paserious. Ndiri HIV positive, ndinoda ari pamushonga seniwo asingaratidzi kurwara. Ndinoita mubato wemaoko uye ndinoda anofarira kunamata. Andifarira ngaandibate pa0715 776 990. Vanobhipa kana call back aiwa, fonai. Ndinogara muno muHarare. Zvakawanda totaura mafona.
Ndiri murume ane makore 37 nevana 4, HIV negative uye ndotsvagawo musikana wekuroora asati ambopinda mumba kana kuita mwana. Ane makore 19 – 25 anonamata ari serious asi nzenza kwete. Nhamba 0716 107 758.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 ndotsvagawo musikana anoda zvemba asiri pamushonga. Nhare yangu 0776 711 212.
Ndiri murume ane makore 26 ndotsvagawo mukadzi ane makore 19 kusvika 24 asiri pamushonga. Anenge andifarira ngaandibate pa0776 711 212.
Makadii henyu? Ndatora nhamba paKwayedza paTishamwaridzane. Ndiri kutsvagawo mukomana anondidawo uye anoenda kubasa asiri murume wemunhu. Nhare yangu 0783 937 463.
Makasimba here? Ndiri murume ane makore 39 ndinotsvakawo mukadzi wekuroora. Ngaave ane chokwadi nekupinda muwanano. Zvizhinji tinozotaura. Nhare yangu 0715 560 746.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 32 nevana 2 ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora ane makore 18 – 22. Ndinoshanda muHurumende uye handisi pamushonga. Nhare yangu 0775 989 664.